Maxkmada ICJ oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Maxkmada ICJ oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda ee Soomaaliya...
Maxkamada Caddaalada Adduunka ICJ ayaa diiday in dib loo dhigo dhagaysiga dacwda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilka sii-haya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in Maxkamadda ICJ shalay go’aan kama dambeys ah ku gaartay in waqtigii horey u balamisay in la dhageysto kiiska badda la dhageysan doono, isla markaana aanu jirin doonin in dib mar kale loo dhigo.
“Maxkamadda waxa ay go’aan shalay ku gaartay in dhageysiga dacwadda oo horayna ay u muddeysay hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo, in aan la aqbaleynin in dib loo dhigo mar dambe. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaargaroobaan 15-19 bisha March ee inagu soo aaddan Insha alla” ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ayaa carabka ku dhuftay in Maxkamadda ay Somaliya iyo Kenya ku wargelisay in dacwadda la dhageysan doono 15 ilaa iyo 19-ka bisha soo socda ee March, una u soo diyaar garoobaan.
Dowladda Kenya ayaa markii afaraad ka codsatay in dib loo dhigo dhagaysiga dacwada iyadoo ku sababaysa cudurka Covid 19 inuu saameyn ku yeeshay dalkeeda.
Previous articleBeesha Caalamka oo ku baaqday in si deg-deg ah loo qabto kulanka arrimaha doorashooyinka
Next articleRasaas lagu furay gaari uu saarnaa Imaam Maxamed Yuusuf